Soo saaraha iyo Wershada ugu Wanaagsan ee Saxanka ah ee Caws Square | Tuoda
TD-DG-CJ-014 saxan laba jibaaran caws qamadi
5.9Inch Square Plates Cawska Qamadiga, Culayska aan La jabin karin ee Miisaanka Biyodegradable ee Taarikada Casho-Cashada, Taargo-yar oo Miis ah oo loogu talagalay Ilmaha Saanqaadyada Carruurta ah, 4 Midab
Cabirka Alaabta 15*15cm
Miisaanka Shayga 52g
Maaddada Qamadiga ku-saaxiibtiran
Waxa laga sameeyay fiber caws qamadi dabiici ah oo dabiici ah, 100% BPA bilaash ah, aan sun ahayn, ur lahayn oo deegaan ahaan u wanaagsan. Ma jiro balaastiig iyo walxo kiimiko oo waxyeelo leh. Alaabta miiska oo aad u caafimaad badan oo qurux badan u leh gurigaaga cusub.
Fudud & Aan jabin karin
Taargooyinkan Casho-sharafeedka ah oo loo qaabeeyey qaab meel-badbaadin ah iyo geeso siman oo wareegsan. Way fudud yihiin in la qabto iyo midabada kala duwan ee saxanka cashada ayaa nolosha ka dhigaya mid aad u macaan. Aad u adag oo waara, lama jabin karo xitaa haddii hoos u dhaco! Ka ilaali carruurta iyo dadka waaweyn inay dhaawacmaan.
Makiinada weelka lagu dhaqo & Microwave badbaado leh
Saxannadan cashada aad bay u fududahay in la nadiifiyo, waxaad ku maydhi kartaa saabuun iyo biyo kulul ama waxaad gelin kartaa weel-dhaqahaaga. Waxayna si fiican uga shaqeeyaan foornooyinka iyo microwaves-yada iyaga oo aan aad u kululayn.
Ku fiican xafladaha, picnic, kaamamka, iyo cuntooyinka maalinlaha ah ee guriga, dugsiga, xafiiska, dibadda ama safarka. Doorasho wanaagsan oo loogu talagalay hadiyadaha xayaysiinta ganacsiga iyo hadiyadaha Christmas!
Hore: Lakab labanlaab ah Saxan Qamadi ah oo Caws ah
Xiga: Saxan casho ah oo Caws ah oo weyn
Sanduuqa qadada cawska sarreenka ee saaxiibtinimo leh oo leh maacuun